China Ahịa akwụkwọ mmado rụpụta na rụpụta | Banye na
Mee ka ncheta gị rapara site na ịtụgharị foto niile kachasị amasị gị na akwụkwọ mmado. Ha na-arapara ike ma na-ewepụ ọcha, na-ahapụ nke fọdụrụ afọdụ. Gaa n'ihu ma rapara oge kachasị mma gị weghaara na laptọọpụ gị, akwụkwọ ndetu ma ọ bụ ebe ọ bụla ịchọrọ. Nwere ike ịmepụta omenala Akwụkwọ mmado na peeji nke na dabara dị ka ọtụtụ foto dị ka ịchọrọ, ma ọ bụ nye iwu naanị otu ka ị nwaa!
Mepụta ibe na peeji nke akara mmado foto aha aka nri gị! Site na nchịkọta akụkọ ntanetị nke StickerYou, ịmepụ akwụkwọ mmado n'ụdị ma ọ bụ nha ọ bụla ị chọrọ ị dịtụbeghị mfe. Ejiri ezigbo vinyl mee foto foto anyị niile, yabụ foto gị ka na-adị nkọ n'agbanyeghị ebe ịchọrọ ịme ha. Nke kachasị mma, akwụkwọ mmado foto anyị bụ microwave na asacha efere, na -eme ka ha bụrụ ngwa ọrụ zuru oke maka ịhazi ihe ọ bụla na ihe niile ị nwere ike iche. Nye onyinye echefuru echefu ma ọ bụ jiri ịnyịnya nke akwụkwọ mmado foto gị mara ihe dị egwu n'anya gị.
Ihe onwunwe Akwụkwọ, White / transperent PVC, holographic ihe onwunwe
Nha ọ bụla nha dị
Ekike dị ka gị imewe.
Agba Agba agba / Agba Pantone / agba CMYK
Emecha Gloss lamination. varnish, stampụ ọkụ, Bronzing, na UV
Mbukota Mbukota na OPP akpa, na ike corrugated igbe n'èzí ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Chargelele ihe nlele Dabere na size na-ebi akwụkwọ na imecha chọrọ .Anyị ga-atụle laghachi azụ sample ụgwọ ma ọ bụrụ na ị ịtụkwasị ihe wee. Ma anyị nwekwara ike itinye nnwale n'efu nke dị na ngwaahịa. Agbanyeghị, ọ bụ gị kwụrụ ụgwọ ahụ.
Production Lead Oge Na-adabere na Qty, na-abụkarị ihe dịka 7-10days
Ọnụahịa otu Dabere na ngwaahịa 'ihe onwunwe, size quantities, ebi akwụkwọ chọrọ na mbukota style.
Kwụ ụgwọ okwu T / T, Western union, Paypal wdg
Nke gara aga: Akwụkwọ mmado
Osote: Akwụkwọ mmado azụmahịa
Clear Gold Bottom PET Cupcake Igbe
Igbe Onyinye Ngosiputa Ngwa, Corrugated Carton Box, Bag Nkwado, Igbe Onyinye, Nkwalite Onyinye, Lamination Onyinye Box,